पतिले ज्यान गुमा`एको ६ महिनामै पत्‍नी सुस्मितालाइ बीमाको ठूलो रकम आउँदै गरेको थाहा पाएपछि…. !!! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/पतिले ज्यान गुमा`एको ६ महिनामै पत्‍नी सुस्मितालाइ बीमाको ठूलो रकम आउँदै गरेको थाहा पाएपछि…. !!!
काठमाडौं । हेटौंडा उपमहानगरपालिका ४ सूर्य चोक नजिकै भएको ह त्या प्रकरणमा प्रहरीले मृत`कका ससुरा र नन्दलाई निय`न्त्रणमा लिएको छ । असार २ गते बिहान ७ बजे २२ वर्षीय सुस्मिता थापा आफ्नै घरको भान्सा कोठामा मृ`त फेला परेकी थिइन् । अनुसन्धानका लागि थापाका ५८ वर्षीय ससुरा प्रकाश थापा र २३ वर्षीय नन्द सीता थापालाई ज्यान सम्बन्धी कसुर अभियोगमा नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले बताएको छ ।
घरमै मृ त अवस्थामा भेटिएकी सुस्मि`ता थापाको ह त्या आशंका गरिएको छ। तीन दिनअघि घरको भान्छा कोठामा वी भत्स अवस्थामा भेटिएको सुस्मिताको श वको अनुसन्धान गर्ने क्रममा ह त्या देखिन आएको छ। गत मंगलबार बिहान सुस्मिताको श व भान्छामा भेटिएको थियो। मृतक थापाको टा उकोमा ग म्भीर चो ट पुगेको घटनास्थलमा पुगेका स्थानीयबासीले बताएका छन्।
मकवानपुर प्रहरीले उक्त घटना बारे अनु`सन्धान गरिरहेको जनाएको छ। सुस्मिता थापाका ससुरा र न`न्दको भूमिका शं कास्पद देखिएको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धानका लागि बिहिबार उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। घरमै रहेका ससुरा र नन्दले घटनाबारे थाहा नभएको बताएका थिए। तर सुस्मिताको श व भान्छामा अवस्थामा भेटिनुको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।